त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको चरम लापर्बाही
काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र प्रशस्त जनशक्ति भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चरम लापर्बाही देखिएको छ । विश्वविद्यालयकै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त्यसको चरम रूप बनिरहेको छ । यो अपत्यारिलो सत्य
बजेटअघि नै चरम मूल्यवृद्धि : गोलभेडाको भाउ दोब्बर, खसीको मासुमा २०० बढ्यो
काठमाडौं । यस वर्ष महँगीले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने संकेत देखिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । सामान्यतया बजेट भाषणपछि महँगी बढ्ने गर्थ्यो । तर, यसपटक बजेटअघि नै बजार भाउ
दुई चिनियाँसहित आठ ठेकेदार कालोसूचीमा
काठमाडौं । सम्झौताबमोजिमको काम नगर्ने आठ ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । कालोसूचीमा पर्नेमा दुई चिनियाँ कम्पनीसमेत छन् । कार्यालयले
सुर्खेत । शनिबार २५६३ औं बुद्ध जयन्ती । बौद्धधर्मावलम्बीसहित देशभरका अन्यले धुमधामका साथ बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। सुर्खेतमा पनि शनिबार शान्तिको कामनासहित बुद्ध जयन्ती मनाइयो। सुर्खेतमा बौद्ध धर्मावलम्बीले मूर्ति प्रतिस्थापन
आजका पत्रपत्रिकामा छापिएका कार्टुन
आज प्रकाशित नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट र राजधानीमा छापिएको युवक, बासु क्षितिज र उत्तम नेपालको कार्टुनः
महाकाली सिँचाइ आयोजना सक्न १२० वर्ष
कञ्चनपुर । महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृृष्ठमा छापिएको छ । दुई दशकअघि भारतसँग गरिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धिमा यो नहर बनाइने सहमति
के-के छापिए आजका पत्रपत्रिकामा ? (फ्रन्टपेज हेुर्नहोस्)
आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज हेर्नुहोस्ः
मासुु खाए ५० हजार जरिबाना, सुराक दिए १५ हजार इनाम
गोरखा । गोरखाको एउटा वडा कार्यालयले मासु किन्न, खान र पशुपन्छी पाल्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । र, कसैले यसको उल्लंघन गरे ठूलो मात्रामा जरिबाना तिर्नुपर्ने समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टको
बुद्ध कसरी नेपाली भए ?
काठमाडौं । बुद्ध कहाँ जन्मेका हुन् ? यो प्रश्न नेपालभित्र गरियो भने धेरैको जवाफ सीधा हुन्छ– नेपालमा ! यो प्रश्न नेपालबाहिर गरियो भने पनि बुद्धबारे जान्ने–बुझ्नेहरूले सही उत्तरमा ‘नेपाल’ नै